Granit Xhaka Oo Fariin U Diray Maamulka Kooxda Arsenal!! Miyuu Doonayaa Inuu Baxo?? – Goolhaye
Jun 28, 2021 Aug 9, 2021 SiganeComment(0)
Xidiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda Arsenal iyo xulka Switzerland Granit Xhaka ayaa si cad kooxdiisa ugu sheegay inuu doonayo inuu ku biiro kooxda As Roma ee ka dhisan horyaal-ka Talyaaniga.
Roma ayaa horey u gudbisay dalab €15m una dhiganta £12.9m oo ay ku doonayaan xidiga reer Switzerland balse Arsenal ayaa diiday dalabkaas iyadoo dooneysa €20m una dhiganta £17.2m oo ah qiimaha lagu burburin karo heshiiska xidiga reer Switzerland.
Xhaka ayaa doonaya in kooxdiisa Arsenal aqbasho dalabka kaga yimid kooxda reer talyaani ee As Roma isagoo cadeeyey haatan inuu doonayo ka tagista garoonka Emirates Stadium ee magaalada London.
28 jirka reer Switzerland heshiiska uu kula jiro kooxda Arsenal waxaa uga harsan 2 sano, Arsenal ayaana ku qasbaneyn iney iibiso xidigaan balse wuxuu si cad aan gambasho laheyn usheegay inuu doonayo inuu baxo suuqa xagaagan.
Jose Mourinho oo ah tababaraha cusub ee kooxda Roma ayaa doonayo in Xhaka uu ka dhigo saxiixiisa ugu horeeya isagoo sidoo kale doonayo xidigo ka ciyaara boosas kala duwan inuu keeno kooxdiisa cusub suuqa xagaagan.